Ngo-Novemba ngo-2017-iiRadiyo zenethiwekhi
Ikhaya / 2017 / EyeNkanga
Inyanga: Novemba 2017
ezaposwa ngomhla Novemba 30, 2017
I-Inrico TM-7 / i-Einige Möglichkeiten yayinjalo alles möglich ist mit dem POC
Ngaba kann ich alles machen mit dem U-Inrico Xhosa-7? Hier einige Möglichkeiten wayenjalo alles moeglich ist. I-Aber es geht noch viel mehr. Ngu Zello.info
ezaposwa ngomhla Novemba 29, 2017
I-TM-7 yazo zonke izinto ozithandayo
Kwividiyo engezantsi, ndibonisa indlela endisebenzisa ngayo iI-Nrico TM-7 kunye ne-IRN, iZello, i-Echolink kunye neskena somsakazo.
Ndiyathemba ukuba uyayonwabela. Ndicinga ukuba le yeyona Radio ilungileyo ye-IP endakha ndanayo!
ezaposwa ngomhla Novemba 28, 2017
Ukupakisha kunye nokufaka i-Inrico TM-7 kwideshibhodi yakho yemoto
Le vidiyo ingezantsi ngesiJamani, yenziwe ngu UZello Funk kwaye ibonisa ukukhutshwa kwe- Inrico TM-7 kwaye ilunga njani, kakuhle, kwideshi yemoto.
ezaposwa ngomhla Novemba 26, 2017 Novemba 26, 2017
Sebenzisa i-Echolink nge-Inrico TM-7
Ukusebenza kwe-Echolink kunokwenzeka nge Inrico TM-7. Kodwa de abaphuhlisi be-Echolink bongeze ukubanakho kwimephu yeqhosha le-PTT kanomathotholo kuthumelo oluphambili, kuya kufuneka ucofe isikrini sokuchukumisa kube kanye ukuqala ukuhambisa, kwaye ucofe kwakhona ukuze uyeke. Ukusuka kwimbono yokusebenziseka, kuyasebenza. Asisetyenziswanga nje ngobuchule. Ngapha koko, singama-hams! Sisoloko sithanda ukuphucula!
Unako ukuthumela i imeyile ku-Echolink kwaye ucele ukusebenza okunjalo!
Qaphela: Ukufaka i-Echolink kwi-TM-7 yakho, kuya kufuneka ufake usetyenziso olubizwa ngokuba yi "Setha uLwazi ngezoBomi". Kuya kufuneka uyibeke kwindawo ethi "Reverse landscape". Uya kusiqonda isizathu! 🙂
Yonwabela ividiyo engezantsi.
ezaposwa ngomhla Novemba 25, 2017 Novemba 25, 2017
Uphengululo oluMnandi kwi-Inrico TM-7 yi KE8HAS
Nalu uphononongo oluhle kakhulu kwifayile ye- Inrico TM-7. Ndiyathemba ukuba uyayonwabela yokuzonwabisa.
ezaposwa ngomhla Novemba 24, 2017 Novemba 24, 2017
NgoMgqibelo ngoLwesihlanu oMnyama
Kutheni le nto kungafanelekanga ukuba ukonwabele ii-ops zerediyo? IZIPHUMO ZE-SUPER ngoLwesihlanu omnyama? Jonga ezi zinto zilandelayo!
Inrico TM-7 -I-Radio yeNethiwekhi yokuqala
I-3G / WiFi iyakwazi kwaye yayiyeyona nto ithengiswayo kakhulu!
Sebenzisa ikhowudi yevawutsha ULWESIHLANU kwaye uthole 20% isaphulelo!Iyafumaneka network-radios.com
Iifayile zeRFinder M1 -Kude kakhulu i-DMR ye-Android yeRadio eyakhekileyo. Libala malunga neeplagi zekhowudi. Nge-RFinder M1 konke kulula njengenqaku kwaye ucofe! Ukuhlaziywa kwedatha yabaphindayo behlabathi (i-analog kunye nedigital)
Fumana yakho Iifayile zeRFinder M1 kunye Ukuhanjiselwa ngenqanawe mahala, usebenzisa ikhowudi ULWESIHLANU OMNYAMA
Iyafumaneka yvs.shop Umhambisi osemthethweni weRFinder.
4G / WIFI emangalisayo Irediyo-Tone RT4 idlule kulindelo! Yomelele kakhulu kwaye inokukhetha okumangalisayo ukufikelela kwinethiwekhi ye-IRN engahlawulwayo. Umgangatho weaudiyo uyamangalisa kwaye unokufumana kwangoko isaphulelo of $ 20 usebenzisa ikhowudi RADIODISCOUNT
Ngaba ungathanda a Isidluliseli soSasazo se-15W FM? Dibana neTivdio nge-PLL kunye neLCD.
Uluhlu oluqhelekileyo: 87-108 MHz
Ixabiso eliqhelekileyo: $249
Iyafumaneka MegaHertz.shop kuba $199
Qaphela: Jonga umthetho wendawo malunga nokusetyenziswa kwesi sixhobo.
ezaposwa ngomhla Novemba 23, 2017 Novemba 23, 2017
Inkqubo ye-Inrico TM-7 amaqhosha
Kule vidiyo, Ndibonisa indlela yokucwangcisa isitshixo ngasinye se Inrico TM-7 transceiver ehambayo. Kufuneka usebenzise usetyenziso olukhethekileyo oluya kwenza imephu yezitshixo kunye nemisebenzi oyifunayo.
Umnini-mhlaba wam akazivumeli i-eriyali
Umnini-mhlaba wam akazivumeli i-eriyali. Ndiye ndalushiya ucalucalulo ngasemva ndaya kwi-IRN. Kwaye ndiyayithanda!
Funda ngakumbi malunga ne-IRN yeehams
Udinga ilayisensi yeHamradio esebenzayo yokuhambisa abaphindayo! Kutheni ungazizami? Yeyazimahla. Ungaqala nge-smartphone. Akukho sidingo sokuthenga naziphi na izixhobo! Yonke into oyifunayo yi-smartphone.
Unokude uphumelele fREE Inethiwekhi yerediyo ene-UHF FM Transceiver. Funda ukuba ungayenza njani!
ezaposwa ngomhla Novemba 22, 2017 Novemba 22, 2017
Unboxing kwi-Inrico TM-7
Cofa apha Ukujonga i yokuzonwabisa Unboxing ye Inrico TM-7
ezaposwa ngomhla Novemba 16, 2017 January 6, 2018
I-F22 ehlotyeni kunye ne-RT4 ebusika!
Ukuba unelayisensi yehamradio esebenzayo, ungadlulisela kubantu abaphindayo kwihlabathi liphela. Ingaba ulunde ntoni? Gcina unxibelelana noluntu lwakho lwasekhaya NAKUPHI emhlabeni! Ukuya kuthi ga ngoku unxibelelwano lwe-intanethi, nokuba yi-WiFi, i-3G okanye i-4G, ukusebenzisa unomathotholo womnatha akuzange kube lula kangako ukufikelela kwinethiwekhi yerediyo engahlawulwayo: I-IRN-Inethiwekhi yeRadiyo yeHlabathi Ukudibanisa i-DMR, i-Echolink, i-AllStar kunye ne-analogue eziphindayo zonke zihlangene. Olu nxibelelwano lwehlabathi lukhula ngesantya esingakholelekiyo.
Uya kuva i-Crystal kunye nesandi esikhulu, ukujonga okumangalisayo, iibhetri ezihlala iintsuku. Unokwenza, umzekelo, ukuwela ilizwe ungakhange ulahle uphawu kwaye ungakhathazeki ukuba zeziphi na ii-frequency ozisebenzisayo.
Umfanekiso ongezantsi: Irediyo-Tone RT4 ngemini enethayo.